(Dhegayso) Dowladda Puntland oo si rasmi dowladda federalka ugu wareejisay 2.400 askari oo kamid noqondoona ciidanka xooga dalka. | puntlandi.com
(Dhegayso) Dowladda Puntland oo si rasmi dowladda federalka ugu wareejisay 2.400 askari oo kamid noqondoona ciidanka xooga dalka.
Waxaa maanta Xerada 54 aad Ee Garowe lagu qabtay Xaflad lagu wareejinayay ciidamo katitrsan kuwa Daraawiishta Puntland, oo ku biiraya Ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed.
Ciidankaan oo tiro ahaan gaaraya 2.400 oo Askari, ayaa qayb ka ah ciidama laga qorayay Maamulada xubnaha ka ah Dawladda federalka dhexe, waana heshiis horey loo kala saxiixday oo ku saabsanaa isku dhafka ciidamada Soomaaliya.
Taliyaha Guud Ciidamada difaaca Puntland Sareeyo Guud Siciid Maxamed Xirsi Siicd dheere ayaa sheegay Ciidamada Puntland ku wareejisay dawlada dhexe gaar ahaan Wasaarada gaashaandhiga Somaliya inay ka yimaadeen ciidamada Puntland oo dhexdooda laga soo xulay, wuxuuna carrabka ku adkeeyay in ciidankaani yihiin, ciidankii xooga Puntland ee ku sugnaa xertaha difaaca.
Madaxwayne ku xigeenka Puntland ayaa sheegay in waqti badan soo qaataday in la diyaariyo ciidamada ay wareejinayaan. Camay ayaa tilmaamay in maanta laga bilaabo mushaarkooda iyo masuuliyadda ciidamadan ay leedahay Dawladda federalka Soomaaliya.
Halkaan ka dhegayso codka madaxweyne Camey.
Madaxwayne ku xigeenka 54 aad
BREAKING NEWS:- Xulka kubada cagta Puntland oo reebay Banaadir una gudbay Final.
DEG DEG LIVE UDAAWO:- PUNTLAND 1-0 BANAADIR
BREAKING NEWS:- Dowladda federalka oo sheegtay in maxkamad lasoo taagayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Xulka kubada cagta Puntland oo galabta maraya tijaabo culus oo ku saabsan tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir.
Wasaaradda warfaafinta Puntland oo joojisay seminaar weriyayasha loogu qaban lahaa Garowe.
Dowladda federalka oo xabsiga dhigtay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur.